Ahoana ny fomba fampidinana mozika avy amin'ny Spotify amin'ny findainao | Vaovao momba ny gadget
Spotify no nanjary fampiharana mozika malaza indrindra ho an'ny mpampiasa an-tapitrisany eran'izao tontolo izao. Mihaino mozika amin'ny fampiharana mila fifandraisana internet isika, izay amin'ny tranga maro dia ny angon-drakitra finday. Fa ireo mpampiasa manana kaonty premium amin'ny fampiharana malaza dia afaka misintona ireo hira ihany koa.
Fomba tsara io ankafizo ity mozika ity nefa tsy mihinana angona finday. Fampisehoana iray mahaliana ny mpampiasa maro ao amin'ny Spotify. Noho izany, asehonay anao eto ambany ny dingana tsy maintsy arahinay mba hampidina mozika amin'ny fampiharana streaming malaza.
1 Misafidiana toerana
2 Misintona hira avy amin'ny Spotify
3 Sintomy ny podcasts amin'ny Spotify
Lafin-javatra iray izay tokony hatao amin'ny tranga voalohany dia ny safidio ny toerana ampidininao hoy ny mozika. Spotify dia mamela antsika hisafidy amin'ity tranga ity, indrindra raha manana karatra microSD amin'ny telefaona isika, hahafahantsika tsy handany habaka amin'ny fitadidian'ny telefaona. Mety ho mety amin'ny tranga misy fa mikasa ny misintona hira maro amin'ny telefaona isika noho io fiasa io.
Voalohany indrindra mila manokatra ny fampiharana Spotify amin'ny telefaona ianao. Raha vao ao anatiny dia tsindrio ny kisary kodiarana fitaovana, hita eo ankavanan'ny efijery. Amin'izany fomba izany dia sokafana ny fikirakirana ny rindranasa, izay mila hijerena ny faritra fitahirizana. Ao anatin'izany no anomezana antsika angona momba ny fitehirizana izay ampiasainay amin'ilay rindranasa.
Eto isika dia afaka safidio ihany koa ny toerana anaovana fampidinana ireo hira ireoRaha sanatria manana toerana mihoatra ny iray isika dia jereo raha mampiasa karatra microSD amin'ny finday avo lenta isika. Safidintsika avy eo ny toerana izay aleontsika misintona ireo hira izay ampidininay avy amin'ilay rindrambaiko. Amin'izany fomba izany, ny fampidinana dia handeha mivantana any amin'ny toerana manokana nofidintsika.
Rehefa vitantsika izany dia vonona izahay amin'ny dingana manaraka, dia ny fampidinana ireo hira. Mety hampidina hira maro avy amin'ny Spotify isika, kapila iray manontolo. Rehefa hanao izany, tsara ny mampiasa WiFi amin'ny telefaona, satria raha tsy manana tahan'ny angon-drakitra finday tsy voafetra ianao, dia mety ho avo lenta amin'io ny dikany. Ka tsara kokoa ny misoroka loza, mampandeha tsara ny WiFi amin'ireo fampidinana ireo, indrindra raha maro ny hatao.
Misintona hira avy amin'ny Spotify
Ao amin'ny Spotify dia manana safidy maromaro isika raha mikasika ny fisintomana mozika. tAfaka misintona hira tsirairay isika, raha misy hira amin'ny kapila na amin'ny playlists izay tena mahaliana anay. Azontsika atao ihany koa ny miloka amin'ny fisintomana rakikira iray manontolo na ny playlist iray manontolo. Ireto ny safidy ananantsika amin'ny fampiharana. Ka miankina amin'ny zavatra ilaintsika amin'ny lafiny tsirairay dia afaka misafidy izay tadiavintsika isika.
Raha te-hisintona kapila na hira vitsivitsy ianao amin'izany, mila mampiditra ny piraofilina na pejy amin'ilay rakikira resahina isika amin'ny Spotify. Ho hitantsika eo fa manana safidy hisintona isika, satria manana kaonty premium ao amin'ilay fangatahana. Raha te-hisintona ny kapila manontolo isika dia tsindrio io safidy fampidinana io. Raha toa ka liana amin'ny hira tsirairay avy izahay avy eo dia misy kisary misy teboka telo mitsangana eo akaikin'ny hira tsirairay. Amin'ny fipihana eo io dia manana safidy maromaro isika, ny iray amin'izany dia ny misintona. Ka tsindrio eo io.
Safidy azo atao koa ny ampio ny hira tsirairay amin'ny lisitry ny lisitry ny fampiharana. Vantany vao namorona lisitra iray isika dia omena fahafahana misintona ny playlist voalaza amin'ny fitambarany. Ka aseho azy ho fomba tsara iray hafa ahafahana manana fidirana amin'ireo hira rehetra ao amin'ilay application. Ao amin'ny fizarana playlist, kitiho ny kisary amin'ireo teboka mitsivalana telo eo akaikiny. Ny iray amin'ireo safidy dia ny misintona, noho izany dia tsindrio izany ary alaina amin'ny telefaona ity playlist ity.
Fomba fitadiavana tombony azo amin'ny Spotify amin'ny findainao
Sintomy ny podcasts amin'ny Spotify
Nandritra ny fotoana fohy dia hitantsika ny fomba mahazo vahana amin'ny Spotify ireo podcast. Mihabetsaka ny fifantenana ary afaka manao hetsika bebe kokoa miaraka amin'izy ireo isika. Ny iray amin'ireo lahasa izay ananantsika dia ny misintona ireo podcasts ireo. Toy ny amin'ny fisintomana ireo hira, dia fiasa izay tsy misy afa-tsy ireo mpampiasa manana kaonty premium ihany no afaka manana amin'ity tranga ity. Fa azo antoka fa misy antoko liana maro.
Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy mitady ilay podcast resahina mahaliana antsika isika. Vao tsy ela akory izay, Spotify dia manome antsika ny mety hametraka azy ireo ao anaty playlist. Ka raha te hanaraka ilay rafitra mitovy amin'ny taloha ihany isika, hamorona playlist ary avy eo maka ny lisitra voalaza dia azo atao ihany koa. Na afaka ampidinintsika mivantana amin'ny telefaona ilay podcast resahina. Ny tsirairay dia misafidy safidy tsara indrindra amin'ny azy.
Na ahoana na ahoana, mila miditra ny mombamomba ilay podcast resahina isika ary miditra amin'ilay fizarana mahaliana antsika izahay. Ao anatiny dia tsindrio ny teboka telo mitsangana ary hiseho ny andiana safidy. Tsy mila tsindrio fotsiny ny safidy fampidinana, mba hananantsika an'ity podcast ity amin'ny toerana izay nofidintsika teo aloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tutorials » Ahoana ny fomba fampidinana mozika avy amin'ny Spotify
Ity no "unboxing" voalohany an'ny Huawei Mate X